﻿	ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ Air Fryer Bacon (ဒါလွယ်ကူ!) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ပျားရည်သံပုရာတစ်သင်းလုံးကကစားသမားနှင့်အတူ kale သုပ်
5 မိနစ် grit အောင်ဘယ်လို
အိမ်လုပ် Bagel ချစ်ပ်များပြုလုပ်နည်း
Crispy Air Fryer ဘေကွန်
Air fryer ဘေကွန်သည်အချိန်တိုင်းအရသာကြည်လင်ပြတ်သားစွာထွက်ပေါ်လာသည်။
လေအေးပေးစက်နှင့်ဘေကွန်သည်ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်သည့်မိတ်ဖက်ဖြစ်စေသည်။ လေမှုတ်စက်သည်အချိန်တိုအတွင်းအရာခပ်သိမ်းကို လုပ်၍ လေပြေလေညှင်းအောင်လုပ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးသောကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဘေကွန်သည်ချွင်းချက်မဟုတ်ပါ။
ငါဘေကွန်ကြော်တော့မရှိတော့ဘူး၊ ဘေကွန်ကိုအမဲဆီအလျှိုလျှိုမထည့်ဘဲတဝက်ကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့ strips တွေကိုလှည့်မကြည့်တော့ဘူး။ ဒါဟာတစ် ဦး Win-Win ပဲ! ငါအများကြီးအောင်ငါကိုချစ်အဖြစ် မီးဖို၌ဘေကွန် , ငါလေပူဖို (သေးငယ်တဲ့လူအစုအဝေးအဘို့အလုံအလောက်လုပ်ဖို့လွယ်ကူပေမယ့်) သေးငယ်တဲ့အသုတ်လုပ်လွယ်ကူပြီးရှာတွေ့နှင့်သန့်ရှင်းရေးဟာလေပြေပါ!
ဤသူသည်ငါ၌ရှိသည်လေကိုကြော်စက်ဖြစ်ပြီး (နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ) ။
Air Fryer Bacon သည်လွယ်ကူသည်
အကောင်းဆုံးမှာ၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောအဘို့အမှာအားလုံးအချိန်မမှာအဆင်သင့် blt ကင်ဒိန်ခဲ သို့မဟုတ်တစ် ဦး အဘို့အတက် crumble ရန် ပန်းဂေါ်ဖီပန်းဂေါ်ဖီသုပ် ။
Air Fryer တွင်ဘေကွန်ကိုမည်သို့ချက်ပြုတ်ရမည်နည်း
ရေအနည်းငယ်ကို Preheated air fryer ၏အောက်ခြေတွင်ထည့်ပါ။
strips များကို preheated air fryer တွင်ထားပါ။ ရှစ်မိနစ်မှ ၁၁ မိနစ်ခန့်သို့မဟုတ် crispy မတိုင်မီအထိချက်ပြုတ်ပါ။
pro အမျိုးအစား: လေမှုတ်စက်၏အောက်ခြေတွင်ရေထိတွေ့မှုကိုကျွန်တော်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသည်လေပူဖောင်းဖို့စာအုပ်တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်ကောက်ယူခဲ့သည့်အစွန်အဖျားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှအောက်ခြေ၌အမဲဆီတားဆီး။ သုတ်အကြားလေထုဖရီရီရီ၏အောက်ခြေကိုသေချာရှင်းလင်းပါ။
Air Fryer Bacon ပြုလုပ်နည်းအတွက်အချက်များ
အရွယ်အစားတူညီပြီးအဆီနှင့်အဆီနှင့်တူညီသောအချိုးအစားရှိသော strips များကိုသုံးပါ။
Air Fryer Bacon သိုလှောင်နည်း
ချက်ထားသောအချပ်များကိုလေလုံကွန်တိန်နာတစ်ခု (သို့) ဇစ်ပါအိတ်တစ်ခုတွင်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းထားပါ။
အပိုင်းအစတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်အချိန်တန်လျှင် ၁-၂ မိနစ်သို့မဟုတ်လေပူစက်ထဲသို့အပူမရောက်မီတစ်နာရီလျှင်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်တွင်ဆယ်စက္ကန့်အကြာတွင်ပြန်လည်အပူပါ။
သုပ်သို့မဟုတ် casseroles အပေါ်ခုတ်သို့မဟုတ်ဖြန်း! သင်ပြီးပြည့်စုံသော topper လိုအပ်သည့်အခါ Air fryer ဘေကွန်သည်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
အကောင်းဆုံး Bacon ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဘေကွန်ဒိန်ခဲ - ဒါ cheesy
ဘေကွန် - ထုပ်ရက်စွဲများ - ပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်းနေ့ appetizer
အညိုရောင်သကြား Bacon Smokies ထုပ် - လူကြိုက်များတဲ့လူအုပ်ကြီး
ပြီးပြည့်စုံသော BLT - လတ်ဆတ်ပြီးအရသာရှိတဲ့
ဒီ Air Fryer Bacon ကိုကြိုက်လား? အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်မှတ်ချက်ထွက်ရန်သေချာစေပါ။
Air Fryer ဘေကွန်
ချက်ပြုတ်ချိန်၈ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၈ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၈ ချပ် စာရေးသူHolly Nilsson Air Fryer Bacon သည်အချိန်တိုင်းperfectlyုံကြည်လင်ပြတ်သားစွာထွက်ပေါ်လာသည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၈ ချပ် ဘေကွန်
ဘေကွန်ချပ်များကိုလေပူဖောင်းထဲတွင်ချထားပါ။ (သင်၏လေပူဖောင်း၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့ကိုတစ်ဝက်ပိုင်းဖြတ်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ )
8-11 မိနစ်သို့မဟုတ်ပြတ်သားသည်အထိထမင်းချက်ပါ။ ဘေကွန်ဖယ်ရှားပြီးစက္ကူမျက်နှာသုတ်ပဝါပြားပေါ်တွင်တင်ပါ။
ဘေကွန်အားလုံးချက်ပြုတ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုအားလုံးကိုရေခဲသေတ္တာထဲသို့ပြန်ထည့်ပြီးအပူ ပေး၍ တစ်ပြိုင်နက်အမှုတော်ဆောင်ရန် ၁ မိနစ်ချက်ပြုတ်ပါ။
သုတ်များနှင့်အတူချက်ပြုတ်, အသုတ်အကြားအမဲဆီဖယ်ရှားပစ်ရန်စက္ကူမျက်နှာသုတ်ပဝါနှင့်အတူဗန်း၏အောက်ခြေထိုး။ ပိုမိုပါးလွှာသောဘေကွန်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာချက်ပြုတ်နိုင်ပြီးပိုထူသောဘေကွန်သည်ကြာကြာလိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
သော့ချက်စာလုံးAir Fryer ဘေကွန်, Air Fryer ဘေကွန်စာရွက်၊ အကောင်းဆုံးလေပူကြော်စက်ဘေကွန်၊ လေပူစက်ထဲတွင်ဘေကွန်ပြုလုပ်နည်း သင်တန်းလေမှုတ်စက်၊ နံနက်စာ၊ ဝက်သား ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။